ISilivere (XAGUSD) yooVimba-Funda ukuRhweba
tag: Isilivere (XAGUSD)
ISilivere (XAGUSD) Uhlalutyo lweXabiso – nge-5 kaDisemba
Isilivere (XAGUSD) uhlala ephantsi koxinzelelo, emva kokunciphisa ukwehla kokulungisa ukusuka kwi-multiday low ngoLwesihlanu. Emva kokuhla ukuya kwi-22.03 yeedola ezisezantsi, isinyithi esimhlophe sinokuthi siqinise i-bounce yakutshanje ukuya kwinqanaba le-$ 23.00. Njengoko ukuhamba komngcipheko kulawula iimarike zezimali, isinyithi esimhlophe siyaqhubeka sitsala abathengi.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 24.00, $ 23.50, $ 23.00
Amanqanaba enkxaso: $ 22.03, $ 21.42, $ 21.00
Kwitshathi yemihla ngemihla ye-XAGUSD, ukunyuka kwamaxabiso okubalulekileyo kuye kwaqinisekiswa, nto leyo edla ngokukhokelela ekubeni kukhawuleziswe kwangaphambili kwangaphambili. Ngenxa yoko, ibonakaliswe njengesiqhelo sokubuyela umva kwe-bullish.
Ukuqinisekisa i-rebound ephezulu, ukuvala imihla ngemihla ngaphezu kwesiphelo esiphezulu seflegi, ngoku kwi-$ 22.59, kuyimfuneko. Oku kunokukhokelela kwixabiso le-$ 23.50 (ithagethi ngokwe-avareji ehambayo ye-13). Isilivere, ngakolunye uhlangothi, inokuhlangabezana nokuchasana kumanqanaba e-$ 23.00 kunye ne-$ 24.82 (ephakamileyo ye-Oct 21).
Isilivere (i-XAGUSD) iye yaphinda yanda ngakumbi ukusuka kumbono wobugcisa, njengoko kuboniswe kwitshathi yeeyure ze-4. Ngoku iye yabuyela kumanqanaba angaphezu kwe-5 kunye ne-13 ye-avareji ehambayo. Ukuchasana okufutshane kwi-$ 23.02, ngelixa inqanaba lokuqala kunye nesibini lenkxaso liqikelelwa ukuba lijikeleze i-$ 22.10 kunye ne-$ 21.42, ngokulandelanayo.
I-rally ye-XAGUSD inokuqhubeka kunye ne-intraday bias ekhomba kumqobo we-$ 23.02. Ikhefu apho liya kuqinisekisa ukubuyiswa kokulungiswa ukusuka kwinqanaba le-$ 25.40 liphelile. Kwi-upside, ikhefu elingaphezu kwe-$ 23.50 isithintelo esincinci siya kubangela ukuba kubekho i-intraday bias. Kwimeko ye-pullback, nangona kunjalo, umngcipheko uya kuhlala kwi-negative ukuba nje i-$ 23.02 inqanaba lokumelana libambe.
Isilivere (XAGUSD) iRhweba ngokungaqiniseki, igcina uluhlu olungaphantsi kweedola ezingama-23.00
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Novemba 29
Ngethuba leseshoni yoMvulo, iSilivere (i-XAGUSD) idibanisa ilahleko yenyanga malunga namanqanaba e-$ 23.00 emva kokutsala umva kwi-intraday ephezulu kwinqanaba le-$ 23.44. Kwisiqingatha sokuqala sosuku, i isinyithi esimhlophe yahlala ibhidi kwaye ekugqibeleni yabonwa irhweba kwi-22.98 yeedola, phantsi malunga ne-0.70% ngosuku.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 24.50, $ 24.00, $ 23.50
Amanqanaba enkxaso: $ 22.50, $ 22.00, $ 21.42
Abathengisi baye baphinda balawula iSilivere (i-XAGUSD) kwixesha eliphakathi ukuya kwixesha elide, njengoko ixabiso liqhubeka nokuhlasela ngaphantsi kwendawo yenkxaso esondeleyo ye-horizontal kwi-$ 23.00. Ikwangqamana nokunyuka kwenkxaso ye-trendline, yenze umqobo owoyikekayo kwiibhere.
Intsimbi emhlophe ibuyele umva kwinkxaso ye-trendline ekhuphukayo kwi-22.80 yeedola ukuya kwi-intraday high, kwaye ukuphulwa okungaphezulu kwelo nqanaba kunokukhokelela ekuvavanyeni kwendawo yokumelana ne-horizontal kwi-23.50 yeedola. I-Relative Strength Index (RSI) yemihla ngemihla ibheka emazantsi, ibonisa ukuba kunokwenzeka ukuhla.
Ukusuka kumbono wobugcisa bexesha elifutshane, iSilivere (i-XAGUSD) ifuna ukuchacha emva kokubetha inkxaso eqinileyo kwi-22.93 yeedola, kwaye izikhombisi zesantya zikwabonisa umfanekiso wexesha elifutshane elimfiliba.
Ikhefu elinamandla phezu kokuchasana okuthe tye kwi-23.50 yeedola kunokuvula indlela yenqanaba eliphezulu kwi-$ 24.00. Inqanaba le-$ 24.50 limele injongo elandelayo ephezulu. Inkxaso ebalulekileyo yexesha elisondeleyo ifunyenwe kwi-22.50 yeedola, esebenza njenge-stopgap yelahleko yesilivere eyongezelelweyo ukuya kwinqanaba eliphantsi lonyaka le-21.66 yeedola.
ISilivere (XAGUSD) Yehla Njengoko i-USD Isomeleza kwiTowuni yeMarike yoMngcipheko
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Novemba 21
Ngexesha lokubhala, i-Silver (XAGUSD) iphelile iseshoni yangaphambili ebomvu, phantsi malunga ne-1%, kwinqanaba le-$ 24.55. Kwiimarike ze-equity ngoLwesihlanu, kwakukho ithoni yemarike yomngcipheko eqinisa i-greenback. Esi sibini sinokuhlala sicinezelekile phantsi komqobo we-$ 25.00 kwiveki entsha, njengoko Idola yaseMelika ufumana amandla.
Amanqanaba enkxaso: $ 24.50, $ 24.00, $ 23.50
Njengoko imarike ibonakala icela umngeni kwindawo yenkxaso ethe tyaba ekufutshane ngoku kwinqanaba le-24.50 yeedola, abathengisi be-XAGUSD baphinde baphinda balawule ixesha eliphakathi. Inkxaso enyukayo ye-trendline, enokuthi isebenze njenge-backstop, ilele ngaphantsi kwenqanaba le-$ 24.00, iyenza isiseko esihle seebhere.
Ekukhuleni kwamandla e-USD, isinyithi esimhlophe siwile ekuchaseni malunga nomyinge ohambahambayo we-5, kwaye ikhefu elingaphantsi kwe-$ 24.50 inqanaba lingakhokelela ekuvavanyeni ummandla wenkxaso othe tye kwinqanaba le-$ 24.00. I-Relative Strength Index (RSI) yemihla ngemihla ibheka emazantsi, ebonisa ukuba ukulungiswa okungalunganga kunokwenzeka.
I-XAGUSD yagqityelwa ukubonwa igula kwi-24.62 yeedola kwisitishi esiphezulu setshathi yeeyure ze-4. Ngeli xesha, imiqondiso yobugcisa kwitshathi yeeyure ezi-4 ijonge ukuhla, ebonisa ukuba ubuthathaka obungakumbi bunokwenzeka. Nangona kunjalo, i-RSI yexesha elifutshane enokwenzeka yokubuyela umva kufuneka ijongwe ngononophelo ngaphambi kokumisela ukuhla okungaphezulu.
Ikhefu elinamandla ngaphantsi kwenkxaso ethe tye kwi-$ 24.50 ingakhokelela kumanqaku aphantsi kwi-$ 24.00. Injongo elandelayo ephezulu, ngakolunye uhlangothi, ikwizinga le-$ 25.00. Uncedo olusondeleyo olubalulekileyo lufumaneka kwi-24.00 yeedola, esebenza njenge-stopgap yokunciphisa isilivere eyongezelelweyo ukuya kwi-low yenyanga ye-23.02 yeedola.
ISilivere (XAG) iSlayidi ezantsi, evumela iibhere emva kokuhla kwamva nje ukusuka kwi-24.00 yeedola.
Isilivere (XAG) iSlayidi ezantsi, inika amandla iibhere emva kokuhla kwamva nje ukusuka kwi-24.00 yeedola.
Amaxabiso esilivere (XAG) ehle kwiseshoni yangaphambili. Isibini se-XAGUSD sawela kwi-$ 23.65 ephantsi njengoko i-dollar yase-US yaphakama, inqanaba layo eliphantsi kakhulu ngeveki. I isinyithi esimhlophe kubonakala ukuba kufunyenwe ukwamkelwa ngaphantsi kwe-$ 24.00, kunye nelahleko ye-intraday malunga neepesenti ze-0.70. Ngeli xesha ngaphambi kokuvalwa kwayo ngeveki, iSilver ifumene umhlaba, iphuma kusuku olungaphambili nge-23.89 yeedola.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 25.00, $ 24.50, $ 24.00
Amanqanaba enkxaso: $ 23.50, $ 22.87, $ 22.10
Ngokubanzi, imingcipheko yeSilver (XAG) ihlala i-bearish, kunye ne-$ 23.65 yangoLwesihlanu ngoku isebenza njengethagethi elandelayo ebalulekileyo. Inqanaba le-$ 23.50 liya kuba lilo lokubetha iibhere. Iimeko eziwayo ze-RSI, ezibonisa kwinqanaba le-22.87 yeedola njengenqanaba lenkxaso elithe tye, kunokwenzeka ukuba lixhase iibhere zesilivere.
Intsimbi emhlophe ngoku ithengisa ngobuthathaka obuncinci kufuphi nenqanaba le-$ 24.00, njengoko lizama ukubuyisela. Kwelinye icala, ukuba ixabiso leSilivere lirhweba ngaphezulu kwe-24.00 yenqanaba lendawo yokuhlangana, i-bullish traction inokufumana i-traction kwaye ivule ii-odolo zokuthenga, mhlawumbi ibangele ukunyuka okubukhali kwesilivere ukuya kwinqanaba eliphezulu le-$ 25.00.
I-XAGUSD iphule kwi-channel ye-bearish, ngokuhambelana nohlalutyo lobugcisa kwixesha eliphantsi, kwaye inokurhweba phakathi kwenqanaba elisondeleyo lokumelana ne-$ 24.00 kunye nexesha elifutshane eliphantsi kwe-$ 23.50. Ukuba ukuphuka okuphantsi kwenzeka, intsimbi emhlophe iya kuqhubeka ihla ukuya kwinqanaba elilandelayo lokuxhasa i-$ 22.87.
Ukubuyela kwinqanaba le-$ 24.00 linokwenzeka ngaphezu kwe-$ 23.50 yezinga. Isilivere inokuphinda ibuyele umva ukusuka ekugqithiseni kunye nokurhweba kwi-$ 24.50s, kodwa inzuzo ngaphezu kokuphezulu kwangoku kwe-$ 24.82 ihlala inokwenzeka. Ubhejo olufutshane lunokwenzeka kakhulu ngaphantsi kwe-$ 23.50, kunye neethagethi zokwandisa i-$ 22.87 kunye ne-$ 22.10.
Isilivere (i-XAG) ihleli ngokuLungileyo, nge-Barrier ye-25.00 kwi-View
ISilivere (XAG) uHlahlelo lweXabiso – ngama-24 kaOkthobha
Isilivere (i-XAG) ityibilikile isuka kumanqanaba angaphantsi nje komqobo we-25.00 yeedola, ihlehla phantsi kwe-24.50 yendawo ye-$XNUMX ngokomelela kwempendulo eyomeleleyo yedola yaseMelika Fed Powell's izimvo ngexesha leseshoni yangaphambili. Intsimbi emhlophe yagqityelwa ukubonwa irhweba malunga ne-0.71 yepesenti ephezulu, kancinane malunga ne-24.00 ye-$.
Amanqanaba enkxaso: $ 24.00, $ 23.50, $ 23.00
Iinkunzi kwi-XAGUSD zizame ukutyhutyha isithintelo esidala malunga ne-25.00 yezinga le-3 Septemba 2021 kodwa yabuyela kwinqanaba le-$ 24.32. Ngenxa yoko, umgca othe tyaba ngokwasengqondweni kwi-24.50 yeedola unokubonelela ngesoyikiso kwi-quote's up bias. Ukuba umkhwa uyaqhubeka nokuphula umqobo we-$ 25.00, i-peak ka-Agasti malunga ne-$ 26.00 iya kuba yinjongo elandelayo.
Ngokuchasene noko, ikhefu elingaphantsi komgca wenkxaso ulandelayo, okwangoku malunga ne-$ 24.00, inokuthi inyuse amaxabiso esilivere ukuya kwi-23.50 yeedola. Nabuphi na ubuthathaka obungakumbi, nangona kunjalo, kufuneka bukhuphe i-21.42 ye-dollar ephantsi yonyaka ukwenza iSilver (XAG) iqhube ingasebenzi. Intsimbi emhlophe ingaqhubeleka phezulu kwiseshoni elandelayo.
Kwitshathi yeeyure ze-4, i-oscillators yeSilivere (XAG) ibonisa ukuba ukunyakaza okusemacaleni kunokwenzeka. I-RSI ihambela emazantsi ngaphezu kwemigca ye-50 engathathi hlangothi, ebonisa ukukhawuleza okungalunganga, kunye ne-avareji ehambayo ye-5 kunye ne-13 iyadibana.
Ngaphezulu kwe-24.00 ye-handle, ixabiso le-XAGUSD libonisa intshukumo ethe tye. Intsimbi emhlophe ngoku irhweba ngaphezu kwamanqanaba enkxaso yexesha elifutshane, kodwa isakhiwo se-bullish siyaphela. Ukuba iinkunzi zenkomo zibuyisela ulawulo, nangona kunjalo, ukunyuka kwamaxabiso kunokuqala ukuyeka kufuphi nokuphakama kwamva nje kwe-$ 24.82.
Isilivere (i-XAGUSD) inyuka ngaphaya kwama- $ 22.00 kububanzi bokuba buthathaka kweDola yaseMelika
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Okthobha 3
Isilivere (i-XAGUSD) yandisa imeko yayo ephezulu, inyusa isuka kwi-lows yakutshanje ejikeleze i-21.50 yeedola ngelixa inyuka ngaphaya kwenqanaba eliphakathi le- $ 22.00 yangoLwesihlanu. Ukuwa Isivuno se-US bond kukhulisa ukunyuka kwe-XAGUSD, kunye neminyaka elishumi ye-coupon yenqaku lokuphumla elihlala kwiipesenti ze-10, phantsi kwamanqaku amabini (bps).
Amanqanaba okumelana nawo: $ 24.00, $ 23.50, $ 22.87
Amanqanaba enkxaso: $ 22.10, $ 21.42, $ 21.00
Ngaphandle kwemilinganiselo yayo ehambayo 5, iSilver (XAGUSD) ifumene abathengi abatsha, bandise ukubuyela umva ukusuka emazantsi wenqanaba lenkxaso ethe tye kwi- $ 21.42. Ukomeleza ukunyanzeliswa kwe-bullish kungabonwa kwi-RSI ephezulu yokuxuba kunye nexabiso lokubuyisela ixabiso eliye laphula ngokuhamba kwe-13.
Ukunyuka kwenqanaba leedola ezingama-21.42 kuthathwa njengenqanaba lesaphulelo kwipateni ukusuka kwi- $ 30.13 ephezulu kumxholo omkhulu (2021 phezulu). Ujoliso olulandelayo lwerali kukuchasana kweqela kwi $ 23.50. Logama nje ukumelana ne- $ 22.10 kuguqula inqanaba lenkxaso, le iya kuba yimeko ekhethiweyo.
Isilivere (i-XAG) iphinde yavela kwakhona kumbono wobuchwephesha, njengoko kubonisiwe kwitshathi yeeyure ezi-4. Ngoku ibuyiselwe kumanqanaba angaphezu kwe-5 kunye ne-13 i-avareji ehambayo, kunye nangaphezulu kwexesha elifutshane le-RSI midline. Ukuxhathisa okusondeleyo ku- $ 22.87, ngelixa amanqanaba enkxaso yokuqala kunye neyesibini eqikelelwe ukuba abe malunga ne- $ 22.10 kunye ne- $ 21.42 ngokwahlukeneyo.
I-rally ye-XAGUSD iya kuqhubeka namhlanje, kunye ne-intraday bias ekhomba kwisithintelo se- $ 22.87. Ikhefu apho liya kuqinisekisa ukuba ukubuya ngokulungileyo kwinqanaba le-21.42 yeedola kuqalile kwakhona. Kwicala elingaphezulu, ikhefu elingaphezulu kwesithintelo esincinci se- $ 23.50 liya kubangela ukuthambeka okuhle kwangaphakathi.
Isilivere (i-XAGUSD) Phantsi koxinzelelo phakathi kwe-22.00 yeedola yokuNcitshiswa kwamaxabiso eSinyithi
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Septemba 19
Ngokunyuka kweendleko zamandla kunye nokuhla kwamaxabiso esinyithi, iSilver (XAGUSD) iphantsi koxinzelelo olunzima. Emva kokubhetele kunokuba bekulindelwe Idatha yezoqoqosho yase-US Kwiveki ephelileyo, amaxabiso exabiso lesinyithi ehle kwaye aphantsi koxinzelelo phakathi kwinqanaba leedola ezingama-22.00. I-XAG yawa ngaphantsi kwexabiso elibalulekileyo le- $ 23.50 kwaye ukusukela oko yabanamava okuthengisa.
Amanqanaba enkxaso: $ 22.10, $ 21.66, $ 21.00
Kwiveki ephelileyo, i-XAGUSD ihambile isezantsi kwaye inamava koxinzelelo olunzima lokuthengisa emva kokuba isinyithi esixabisekileyo singaphumelelanga ukubamba ngaphezulu kwenqanaba eliphambili le- $ 23.50. Isilivere luphoxiso kubatyali mali njengoko isinyithi esimhlophe besingakwazi ukubuyisa inkxaso enkulu kwinqanaba leedola ezingama-22.87. Nangona isinyithi esimhlophe sihlala ngaphezulu kwe-RSI 30 zone.
I-XAGUSD yawa ngaphantsi kwe- $ 23.50 yamanqaku kunye namava athengisayo. Umzamo wokunyuka ngaphezu kwamanqaku angama-22.87 eedola awuphumelelanga, okwandisa ukwanda koxinzelelo kwintengiso emhlophe. Ngoku sibona ukubuyela umva kwesilivere ngenkxaso eyomeleleyo elandelayo kwi-21.66 yeedola kule veki intsha.
Ngexesha elifutshane, ixabiso leXAGUSD liqikelelwa ukuba lihambe ecaleni ngaphambi kokubuyela umva kumndilili oshukumayo we-13 (ngaphezulu kwenqanaba eliphambili le- $ 23.00). Iibhere ziya kuthi kwangoko zibeke izinto zazo kwi- $ 22.00, ngolwaphulo olunobungozi bokuya kwi- $ 21.66.
Iibhere zincediswa luhlalutyo lwexesha elifutshane le-bearish kunye neemvakalelo ezimbi, ezijolise kwiimeko ezigqithileyo okwangoku, kodwa ulungiso lwamaxabiso lunokwenzeka. Kwiseshoni elandelayo, phezulu ngaphezulu kwenqanaba eliphantsi le- $ 22.10 kuqikelelwe ukubonisa amathuba awomeleleyo wokujoyina kwakhona intengiso elungileyo.